एकताअघिको सम्झौतालाई लिएर स्थायी समिति बैठकमा ओलीमाथि खनिए प्रचण्ड, के-के भने ? — Imandarmedia.com
एकताअघिको सम्झौतालाई लिएर स्थायी समिति बैठकमा ओलीमाथि खनिए प्रचण्ड, के-के भने ?
काठमाडौँ । नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई थाहा छ, आफूहरूबीच गहिरो समस्या छ । तर उनीहरूले त्यो समस्याको जड आफैं हो भन्ने स्वीकार्न नसक्दा एकीकृत पार्टीभित्रको मतभेद झन बढ्दै गइरहेको छ । एकअर्काविरुद्ध हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरिवरी यसले पार नलाग्ने भयो भन्ने सोचेर फेरि मिलनबिन्दु पहिल्याउने अध्यक्षद्वयको सहमति उनीहरूकै व्यवहार र शैलीले भंग गरिदिएको छ ।
बैठकमा अध्यक्षद्वयले मन्तव्यको अधिकांश समय एकअर्कासँग गुनासो गरेरै बिताए । पुराना सहमति, समझदारी तथा पार्टी र सरकारका काम सम्झिए, आपसमा समन्वय नहुँदा पार्टी र सरकार झन ओरालो लागिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओली, उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू र उनीनिकट मानिने नेताहरूबाहेकले सरकारका काम र त्यसको तौरतरिकालाई रुचाएका छैनन् ।
सरकार गठन भएयताका साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री ओली र उनीवरिपरिका केही व्यक्तिको तजबिजमा मात्रै सरकार चलिरहेको र त्यसले पार्टी र सरकार दुवैको बदनाम भइरहेको गुनासो नेकपाभित्रै छ । स्थायी कमिटीको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका कामको फेहरिस्त सुनाउँदा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले हस्तक्षेप गरेर भने, ‘सरकारले धेरै काम गरेको छ भनेर बखान नगरे हुन्छ, सडकका खाल्डाखुल्डी हेर्ने हो भने मेरै निर्वाचन क्षेत्र साँखुमा जाँदा हुन्छ ।’
‘दुई अध्यक्षको अभिव्यक्ति सुन्दा बीचमा समस्या छ भन्ने त प्रस्टै छ, कतिपय अबस्थामा उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने धारहरूका कुरा पनि आउँछन्,’ स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले कान्तिपुरसँग भने, ‘समस्या के हो र पार्टी तथा सरकारलाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा पनि समझदारी नमिलेपछि त त्यसले स्वाभाविक रूपमा नकारात्मक प्रभाव त पर्ने नै भयो । यो समस्यालाई दुइटै अध्यक्षहरूले बुझ्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर उहाँहरूले आफ्नो शक्ति सन्तुलनको कुरामात्रै हो भनेर बुझ्नुभयो भने फेरि अर्काे ब्लन्डर हुन्छ, दुवैमाथि प्रश्न उठ्छ ।’